प्रधानमन्त्री कोइराला जनकपुर आउँदै, कालो झण्डा देखाउने तयारी - www.sahayatra.com प्रधानमन्त्री कोइराला जनकपुर आउँदै, कालो झण्डा देखाउने तयारी - www.sahayatra.com
Home > politics > प्रधानमन्त्री कोइराला जनकपुर आउँदै, कालो झण्डा देखाउने तयारी
प्रधानमन्त्री कोइराला जनकपुर आउँदै, कालो झण्डा देखाउने तयारी
जनकपुरधाम । जनकपुरको राम चौकमा निर्माण गरिएको भव्य तथा सुन्दर राम टावरको उद्घाटन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले बुधबार टावरको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यता प्रधानमन्त्रीलाई जनकपुरधाममा कालो झण्डा देखाइने भएको छ । जनकपुरधाममा सक्रिय युवाहरुको एक संगठनले बुधबार प्रधानमन्त्री कोइरालालाई कालो झण्डा देखाउन तयार रहेको हुलाकी न्यूजलाई जनाएको छ ।
राम युवा कमिटिद्वारा लगभग पचास लाखको लागतमा नि
र्माण गरिएकोे आकर्षक टावरको भव्य समारोहबीच प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको र सो को सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको आयोजक राम युवा कमिटिले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव संतोष यादवले प्रधानमन्त्रीको आगमनको सम्पुर्ण तैयारी भइसकेको बताउँदै उनले आफ्नो मनतव्यका क्रममा मधेशलाई सम्बोधन गर्ने दाबी गरे । जनकपुरका पुर्व मेयर बजरंग प्रसाद साहले जनकपुरप्रति प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र दृष्टि सकारात्मक रहने विश्वास ब्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री बुधबार बुद्ध एयरको विमानबाट विहान ११ः३० मा जनकपुर आईपुग्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाको जानकी मन्दिर तथा राम मन्दिरमा पुजा, दर्शन र निरीक्षणको कार्यक्रम पनि रहेको छ । प्रधानमन्त्रीसँगै योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्द पोखरेल र नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना पनि जनकपुर आउने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको जनकपुर भ्रमणको पुर्वसन्ध्यामा नेपाल प्रहरीका प्रमुख एवं प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त अर्याल तथा गृहसचिव सूर्य प्रसाद सिलवाल जनकपुर आएका छन् । सुरक्षा प्रमुखहरुको टोलीले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा समितिसँग छलफल गरेको छ ।
जनकपुरमा चौतर्फी रुपमा संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाको विरोध भइरहेको समयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको जनकपुर भ्रमण तय भएको छ । टावरको उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री कोइराला बुधबार नै राजधानी फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।
Item Reviewed: प्रधानमन्त्री कोइराला जनकपुर आउँदै, कालो झण्डा देखाउने तयारी Rating:5Reviewed By: Amrendra yadav